Dambudziko rekutanga reMoroccan | Absolut Kufamba
Hondo Yenyika Yekutanga isati yatanga, pasi rose rakakatyamadzwa nemukana wekukonana pakati pemasimba makuru eEurope enguva iyoyo. Panotangira dambudziko iri raive muguta re Tangier, uko zvakadaidzwa nenhoroondo yazvino Kutanga Dambudziko reMoroccan, pakati pa1905 na1906.
Kuti unzwisise zvese zvakaitika pakati paKurume 1905 naMay 1906 kutenderedza guta reTangier, zvinodikanwa kuti uzive mamiriro ezvematongerwo enyika enguva yacho. MuEurope, uye nekuwedzera mune dzimwe nyika, pakanga paine mhirizhonga yepasi rose pakati pemasimba makuru. Vakaitumidza iyo Runyararo Rwehondo. Iyo yakakwana nzvimbo yekuberekera yehondo huru iyo yaizoitika makore gumi chete gare gare.
Mumakore iwayo UK neFrance yakanga yaita mubatanidzwa unozivikanwa nezita rekuti Entente Cordiale. Bumbiro rekunze kwenyika idzi rakavakirwa pakuyedza kuzvitsaura Alemania yenzvimbo dzekunze dzesimba, kunyanya muAsia ne Africa.
Mukati memutambo uyu, muna Ndira 1905 France yakanga yakwanisa kumanikidza simba rayo pa sultan weMorocco. Izvi zvakanyanyisa kunetseka nezve maGerman, avo vaiona vachinetsekana kuti vavengi vavo vaidzora sei nzira mbiri dzeMediterranean. Saka iyo Chancellor Von Bülow Akafunga kupindira, achikurudzira Sultan kuti arambe kumanikidzwa neveFrance uye nekumuvimbisa rutsigiro rweChipiri Reich.
1 Kaiser anoshanyira Tangier
2 Musangano weAlgeciras
3 Kupera kweKutanga kweMatambudziko eMoroccan
Kaiser anoshanyira Tangier
Pane zuva rekumisikidza kutanga kweMatambudziko Ekutanga eMoroccan: Kurume 31, 1905, riini Kaiser Wilhelm II anoshanyira Tangier nekushamisika. MaGerman akasunga zvikepe zvavo zvine simba kubva pachiteshi, vachiita kuratidzira kwesimba. Vepepanhau veFrance vakazivisa zvine mutsindo kuti ichi chiitiko chekutsamwisa.
Vatarisana nekukura kwemalaise eFrance nevabatsiri vayo, maGerman akaronga kubata musangano wepasi rese kutsvaga chibvumirano paMorocco uye, sezvinei, kune dzimwe nzvimbo dzekuNorth Africa. MaBritish akaramba zano, asi France, kuburikidza nevashumiri vayo vekunze Téophile Delcassé, vakabvuma kukurukura nyaya yacho. Nekudaro, kutaurirana kwakabviswa apo Germany yakanyatsozvimisa pachayo ichida rusununguko rweMoroccan.
Zuva remusangano rakagadzirirwa Chivabvu 28, 1905, asi hapana kana rimwe remasimba akadanwa rakapindura zvakanaka. Uye zvakare, maBritish nemaAmerican vakasarudza kutumira kwavo ngarava dzehondo kuTangier. Mhirizhonga yakawedzera.
Gurukota idzva reFrance, Maurice Rouvier, ndokusimudza mukana wekutaurirana nemaGerman kuti vadzivise Hondo inopfuura ingangoitika. Nyika dzese dziri mbiri dzakasimbisa kuvapo kwavo kwemauto pamiganhu yavo, uye mukana wehondo yakazara zvombo zvaive zvinopfuura chokwadi.
Dambudziko rekutanga reMoroccan rakaramba risina kugadziriswa nekuda kwe zvinzvimbo zvinoramba zvichisangana pakati peGerman nevaya vanozove vavengi vayo makore anotevera. Kunyanya maBritish, avo vaida kushandisa simba remauto kumisa iyo yekuwedzera yekutyaira yeReich. VaFrance, avo vaitya kukundwa muhondo nemauto nemaGerman pavhu reEurope, vaisarwa zvakanyanya.
Pakupedzisira, uye mushure mekuyedza kukuru kwekuyedza, iyo Algeciras Musangano. Iri guta rakasarudzwa nekuti riri padyo nenzvimbo yekunetsana uye munharaunda isina kwayakarerekera, kunyangwe España panguva iyoyo yaive yakamira zvishoma kudivi reFranco-Britain.
Kugoverwa kwenzvimbo dzesimba muMorocco maererano neAlgeciras Musangano wa1906
Nyika gumi nenhatu dzakapinda mumusangano uyu: Humambo hweGerman, Humambo hweAustro-Hungary, United Kingdom, Furanzi, Humambo hweRussia, Humambo hweSpain, United States, Humambo hweItari, Sultanate yeMorocco, Netherlands, Humambo hweSweden, Portugal, Belgium. uye Humambo hweOttoman. Muchidimbu, masimba makuru epasi rose pamwe nedzimwe nyika dzakabatanidzwa zvakananga mumubvunzo weMoroccan.
Kupera kweKutanga kweMatambudziko eMoroccan
Mushure memwedzi mitatu yekutaurirana, musi waApril 17 iyo Chiito cheAlgeciras. Kuburikidza nechibvumirano ichi, France yakakwanisa kuchengetedza simba rayo pamusoro peMorocco, kunyange yaivimbisa kuita shanduko dzinoverengeka mudunhu rino. Mhedzisiro huru yemusangano yaive inotevera:
Zvisikwa muMorocco zveFrench Protectorate uye diki Spanish Protectorate (yakakamurwa kuita matunhu maviri, imwe kumaodzanyemba kwenyika uye imwe kuchamhembe), yakazopinzwa mukati Chibvumirano cheFez ye1912.
Kugadzwa kwenzvimbo yakasarudzika yeTangier seguta repasi rese.
Germany inoramba chero nzvimbo inzvimbo muMorocco.
Muchokwadi, musangano weAlgeciras wakapera ne nhanho yekudzoka kubva kuGerman, iyo simba ravo remauto raive rakaderera pane iro reBritish. Kunyange zvakadaro, Dambudziko rekutanga reMoroccan rakavharwa manyepo uye kusagutsikana kwemaGerman kwakapa mamiriro ezvinhu matsva muna 1911. Dzimwe nguva chiitiko chacho chaisava Tangier, asi Agadir, mamiriro ezvinhu matsva emakakatanwa epasi rose anozivikanwa seChipiri Moroccan Crisis.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Dambudziko rekutanga reMoroccan